Tselatra · Mey, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Mey, 2010
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Mey, 2010
Zimbaboe : Fahadisoana ve ny hoe teraka fotsy volonkoditra?
Afrika Mainty 30 Mey 2010
Mitatitra momba ny politikam-bolonkoditra misy any Zimbaboe i Chris Kabwato [ndlr. ao amin'ny blaogy “Zimbabwe in Pictures” na Zimbaboe an-tsary]: In Zimbabwe there is a person who cannot be sworn in as a minister of state, not because of any crime he committed, but he is simply the wrong colour....
Chili: Tolo-kevitra avy amin'ny mpizahantany
Ao an-tanànan'i Arica, any Chili ny mpamaham-bolongana Tomás Bradanovic no nanoratra hoe “tokony hihaino ny mpizahantany isika [es],” fa maro diamaro manko ny mailaka azony avy amin'ny mpizahantany izay saiky manolo-kevitra avokoa amin'ny fanatsarana ny fikarakarana ny mpitsidika, ka tafiditra amin'izany ny fanomezana safidy ho an'olona tsy mihinan-kena, ny fidirana...
Madagasikara: Lahatsarin'ny fifampitifirana nitranga teo anivon'ny foloalindahy
Afrika Mainty 20 Mey 2010
Ny namana mpiblaogy MyDago [ny Madagasikarako] dia manapariaka lahatsarin'ny fifandonan'ny tafika sy ny Zandary nikomy tao Antananarivo androany (Alakamisy faha-20 May 2010).
Meksìkô: Fidàngan'ny maripàna ao an-drenivohitra
Amerika Latina 14 Mey 2010
Nisedra fidàngan'ny maripàna, ny tanànan'i Meksìkô [ndlr. renivohitry ny firenena Meksìka], arak'izay nampitain'i Daniel Hernández mpivoy ny blaogy Intersections [Sampanana], satria nahatratra hatramin'ny 50°C ny maripàna tsikaritra any amin'ny sasantsasany amin'ireo seranan'ny metro [ndlr. fitateram-bahoaka an-dalamby miriòrio ambanin'ny tany].